Daawo Sawirada: Ciidamo katirsan Dowlada oo tababar uga socdo Xerada Milatari ee Turkiga dhiseen – Xeernews24
28. November 2017 /in WARAR/NEWS /von admin
Xerada Milatari ee Dowlada Turkiga ka dhistay deegaanka Jaziira ee duleedka magaalada Muqdisho ayaa waxaa tababar heer sare ah uga socdaa Ciidamo katirsan Dowlada Soomaaliya iyo Saraakiil Ciidan.
Xildhibaano katirsan Baarlamaanka Federaalka Soomaalia gaar ahaan Guddiga Difaaca Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta kormeer ku tegay Xerada Milatari ee Turkiga maamulaan .
Xildhibaanada ayaa u kuur galayay sida ay u socdaan tababarka xeradaasi lagu siinayo ciidanka Dowlada Soomaaliya, waxa ayna Xildhibaanada soo arkeen sida tababarka u socdo iyo nolosha ciidanka la tababarayo.
Xildhibaanada Guddiga Difaaca ayaa xerada intii ay joogeen kulan la qaatay Saraakiil Soomaali iyo Turki ah oo ciidanka Tababarayay, waxa ayna ka dhageesteen warbixin ku aadan ciidanka Tababarka u socdo.
Guddoomiyaha Guddiga Difaaca Baarlamaanka Soomaaliya Xuseen Carab Ciise oo la hadlay Ciidamada tababarka u socday ayaa ku dhiiro galiyay in ay ka faa’iideestan tababarkan, waxa uuna ugu baaqay in ay noqdaan ciidan dhinac walbo ka dhisan.
Xerada Milatariga ee Dowlada Turkiga ka dhisatay magaalada Muqdisho ayaa lagu tababarayaa ciidamo iyo Saraakiil katirsan dowlada Soomaaliya, waxaana xeradan lagu diyaarin doonaa ciidamo tayo leh oo Mustqablka Soomaaliya anfaca.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/11/milan-5.png 363 645 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-11-28 16:53:252017-11-28 16:53:25Daawo Sawirada: Ciidamo katirsan Dowlada oo tababar uga socdo Xerada Milatari ee Turkiga dhiseen
DAAWO VIDEO: AKHRISO: Liiska Mashaariicda ay Dowladda Qatar ka fulineyso dalka... cabudhintii iyo caga-Juglaynti galbeedka Gobolka Sitti oo Xadhkaha Goostay.